PineNote, loharanom-baovao misokatra e64 an'ny PineXNUMX dia mety ho tonga amin'ity taona ity | Avy amin'ny Linux
PineNote, loharanom-baovao malalaka Open64 eReader dia mety ho tonga amin'ity taona ity
Andro vitsivitsy lasa izay ny fiarahamonina Pine64 (natokana hamoronana fitaovana misokatra) nanambara fa efa miasa amin'ny boky elektronika «PineNote» izy, izany taorian'ny taona maro izay nangatahan'ny fiarahamonina ny famoronana fitaovana toy izany.
Amin'izao fotoana izao ny famaritana izay naseho tao amin'ny PineNote, dia io hasiana efijery 10,3 santimetatra amboniny e-ink base, ho fanampin'ny zava-misy fa ny fitaovana dia miorina amin'ny SOC Rockchip RK3566 miaraka amina processeur AQuad-core RM Cortex-A55, AI accelerator RK NN (0.8Tops) ary Mali G52 2EE GPU (OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0), ka mahatonga ny fitaovana ho iray amin'ireo fitaovana avo lenta indrindra ao amin'ny kilasiny.
Niangavy anay izy hamorona fitaovana e-ranomainty nandritra ny taona maro, ary nitady hanamboatra azy ireo hatramin'ny taona 2017. Tadidiko aza ny firesahana ampahibemaso ireo hevitra niaraka tamin'ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina tamin'izany fotoana izany sy ny fikarohana izay mety ho mendrika indrindra amin'ny fitaovana iray . amin'ity karazana ity.
Halefa miaraka amin'ilay fitaovana 4 GB an'ny RAM (LPDDR4) ary 128 GB fitadidiana flash eMMC. Ny efijery 10,3-inch dia natsangana tamin'ny alàlan'ny ranomainty elektronika (e-ink), manohana ny vahaolana 1404 × 1872 teboka (227 DPI), 16 aloky ny volondavenona, hazavam-baravarankely misy famirapiratana miovaova, ary koa sosona roa handaminana fidirana : mikasika. (fitaratra capacitive) ho an'ny fifehezana ny touch sy EMR (résonance electromagnetic) ho an'ny fidirana amin'ny fampiasana penina elektronika (penina EMR).
PineNote koa manana microphone roa sy mpandahateny roa ho an'ny feo, manohana ny WiFi 802.11 b / g / n / ac (5Ghz) ary misy port USB-C sy bateria 4000mAh. Ny bezel eo aloha dia vita amin'ny alimoma magnesia ary ny fonony any aoriana dia vita amin'ny plastika. 7mm fotsiny ny hatevin'ny fitaovana.
Tamin'izany fotoana izany dia nitady hamorona safidy hafa ho an'ny Kindle level-level sy mpamaky e-mpamorona marika lehibe hafa izahay. Na izany aza, fantatray faingana fa ny marika lehibe dia manohana be ny mpamaky azy amin'ny alàlan'ny fivarotana boky ary na dia hivarotra mpamaky e-mail misokatra aza izahay (na fatiantoka) dia mbola tsy afaka nampifanaraka ny vidin'ny malaza izahay. fitaovana ...
Soa ihany fa niova be ny tontolon'ny haitao sy izay azo tanterahina amin'ny e-ink nanomboka ny taona 2017. Hatramin'ny nanambarana ny RockKip's RK3566, dia fantatray fa tonga ny fahafahanay mamorona fitaovana e-ranomainty misokatra.
Raha ny ampahan'ny rindrambaiko hamahana ny «PineNote» ity dia mifototra amin'ny linux miaraka amin'ny fanohanan'ny Rockchip RK3566 SoC izay efa tafiditra tao anaty kernel Linux nandritra ny fivoaran'ny tabilao Quartz64.
Ny mpandrindra fampirantiana e-taratasy dia mbola eo an-dalam-pandrosoana, fa ho vonona amin'ny famokarana. Kasaina havoaka miaraka ireo andiany voalohany Manjaro Linux efa napetraka mialoha sy Linux kernel 4.19.
Kasaina hampiasaina KDE Plasma Mobile na birao birao birao KDE Plasma novaina kely toy ny akorandriaka namboarina. Na izany aza, ny fampandrosoana dia mbola tsy vita ary ny famenoana farany ny rindrambaiko dia miankina amin'ny fomba fampisehoana ireo teknolojia voafantina amin'ny fampisehoana taratasy elektronika.
Ity volana ity dia mitondra vaovao izay andrasan'ny maro aminareo mandritra ny taona maro: Fampahafantarana ny PineNote, fitaovana e-ink farany avo lenta miorina amin'ny solo-sain'ireo birao tokana Quartz64.
Saingy tsy mifarana eto ny vaovao tsara, lasa namokatra ny kitendry PinePhone, nanomboka niasa tamin'ny fonony PinePhone ny mpamorona, mandroso ny fivoaran'ny PineDio ary hitantsika ny kinova firmware vaovao ho an'ny touchpad Pinebook Pro. Misy tany maro no tokony hotratrarina amin'ity volana ity, ka andao isika hanao izany.
Finalmente ho an'ireo izay liana amin'ny PineNoteTokony ho fantatrao fa izy io dia ao anatin'ny dingana prototype alohan'ny famokarana ary tokony hamidy (raha mandeha tsara) amin'ity taona ity amin'ny $ 399.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » PineNote, loharanom-baovao malalaka Open64 eReader dia mety ho tonga amin'ity taona ity
Debian 11 dia miaraka amin'ny Linux 5.10, fanavaozana fonosana, fanatsarana ary maro hafa